1. Ny Mononucleotide Nicotinamide (NMN)
2. Ny nicotinamide mononucleotide sy ny NAD +
3. Ny fikarohana farany momba ny mononucleotide nicotinamide dia miasa amin'ny totozy
4. Ny tombontsoa avy amin'ny mononucleotide nicotinamide (NMN)
5. Manana Mononucleotide Nicotinamide (NMN) Tena Miasa Amin'olona ve Ianao?
6. Ahoana ny fampiasana Mononucleotide Nicotinamide (NMN) ho anti-alahelo?
7. Ny fiantraikan'ny Side Ny Mononucleotide Nicotinamide Tokony ho Fantatrao
8. Aiza no Hahitako Fidiran-doza Anti-Aging-Nokotinamide Mononucleotide (NMN)?
Andao hiatrika izany. Ny fitomboan'ny taovam-pananahana sy ny fikarakarana kosmetika dia ny zavatra ao anatin'ity taolam-panahin'ny hendry ity. Ny zavatra tokony ho fantatrao dia hoe ny fanao dia fohy ary mety hiteraka vokatra lehibe.
Amin'ny endriny manilika dia mamaritra ny laharana CAS izy io, 1094-61-7. Ny votoatiny dia avy amin'ny fihetsika eo amin'ny nucleoside, toy ny nikotinamide riboside ary ny vondrona phosphate.
Ao amin'ny fikarohana voapetaka, ny moka niotinamide mononucleotide miasa amin'ny totozy dia nokarakarain'ny hetsika biolojika hendry, ny fitantanana ny aretin'ny Alzheimer, ny diabeta mifandray amin'ny taonany, ny fahasarotana avy amin'ny fiterahana, ary ny fitsaboana. Na dia eo aza ny hetsika rehetra momba ny fanafody mifandray amin'ny Nicotinamide Mononucleotide, dia ny fandraisana an-tsarimihetsika indrindra dia ny fandraisana anjara amin'ny hetsika fanoherana ny fahanterana.
Ireo fanafody manohitra ny fahanterana dia mandeha toy ny tselatra avy amin'ny tsoka mba hidiran-dra. Ao anatin'ny minitra vitsy dia hoentina mankany amin'ny rà mandriaka izy ireo. Noho izany antony izany, dia miharihary fa mety tsy hisy fiheverana momba ny biochemika atao any amin'ny làlan'ny molecules.
Ny fikorontanan'ny haingana dia nahatonga ireo mpikaroka hanatsoaka ny mety hisian'ny mpanelanelana, izay manamora ny famatsiana solika. Ohatra, i Imai sy ireo mpiara-miasa dia nanomana ny valiny tamin'ny alàlan'ny fanadihadiana natao vao haingana nivoaka tamin'ny Janoary 7, 2019.
Amin'ny taonany, ny vatana dia mampiasa kokoa NAD + mihoatra noho izay afaka mamokatra. Na dia betsaka aza ny ampiasanao ny monotonucidotide nicotinamide, dia mbola fandaniam-potoana ny dingana raha mbola tsy misy molekiola hanampy ny fitaterana azy. Tohizo ny horonan-tsarimihetsika mba hamaha ilay mpanelanelana miafina izay hamaha ny 90% amin'ny fahatsapana efa ela.
Na dia misy fifandraisana ara-toekarena misy eo amin'ireo biomarkers roa ireo aza, dia tsy afaka ny hitantana mivantana ny NAD + amin'ny rafitra mihitsy ianao. Raha mbola azo atao ny fomba, dia tsy hisy ny fiantraikany. Ohatra, ny doka avo dia maneho ny herim-po, ny fanahiana ary ny tsy fahitan-tory. Ankoatra izany, ny fitambarana dia marefo amin'ny alàlan'ny plastika membrane.
The anti-aging Nicotinamide Mononucleotide dia azo ampiasaina ho zava-mahadomelina. Ny fahatongavany amin'ny rindrin'ny tosi-tsakafo sy ny rafi-pitatitra dia manomboka amin'ny telo minitra eo ho eo. Amin'ny 15th Eny, ny rehetra dia horaisina. Ny fandalinana feno nataon'i Imai sy ny mpiara-miombon'antoka aminy dia manamafy fa misy proteinina iray izay manatsara ity tahan'ny haingana ity.
Ny NMN miasa amin'ny olombelona dia miankina amin'izany lalana izany.
Ao amin'ny 1963, manampahaizana mpahay siansa no nanamarika fa ny mikotinamide mononucleotide miasa amin'ny totozy dia manentana ny endri-tsimokaretina ADN, izay manan-danja amin'ny fanatsarana ny asany. Roa taona taty aoriana, dia nisy mpikaroka maromaro nitatitra ny lalan'ny biochemika NAD + mifandray amin'ny asidra tryptophan sy nicotinic.
Raha mikasika ny fianarana 2016, Mills et al. dia hita fa ny fihanaky ny NMN dia mety hanohitra ny fihenan'ny asa ara-batana sy ara-immunolojika amin'ny totoana taloha. Amin'ny fiafaran'ity fanampiny NMN ity Ny fikarohana, ireo mpitsabo dia nanoratra ny fampitomboana ny fanehoana ny cellule immune, ny fihanaky ny lymphocytique, ary ny fialana amin'ny tsy fandriam-pahalemana.
Teo am-piandohana, tamin'ny 2011, Mills, Yoshino, ary Imai dia nampiasa maodely mba hanamafisana ny anjara asan'ny NAD + amin'ny fitsaboana ny diabeta voan'ny diabeta. Tao amin'ny fikarohana 2016 iray hafa, dia nanatevin-tànana tamin'ireo mpikaroka hafa izy izay nanamafy fa ny fanamafisana ny NMN dia mety hanohitra ny fihenjanana amin'ny toeran'ny otrikaretina sy ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny tazomoka efa antitra.
Ao amin'ny 2015, Long et al. dia nanadihady ny fiantraikan'ny NMN amin'ny fahasimban'ny atidoha mitochondrial amin'ny misea amin'ny aretin'i Alzheimer. Ny ekipa dia nanamarika fa ny fitsaboana NMN dia afaka nitsabo ny etiology AD, anisan'izany ny OCR (tsimok'aretin'ny tsiranoka oksizenina), ny NAD + ary ny mitokona mitokona.
Ao amin'ny 2016, i Wang sy ireo mpiara-dia dia namoaka ny fikarohana nataony, ary nanatsoaka hevitra fa ireo fanafody manohitra ny fahanterana dia miady amin'ny aretim-pandrenesana an-tsirambina sy ny fahasimban-tena, izay vokatry ny β-amyloid (Aβ) oligomer. Io proteinina Aβ io dia neurotoxic ary tompon'andraikitra amin'ny famolavolana tabilao ao amin'ny atidohan'ny marary AD. Wang et al. dia nanatsoaka hevitra fa ny fitantanana ny NMN amin'ny totozy dia nitarika ny fihenan'ny olivomera Aβ, ka nampitombo ny asan'ny kognita.
Taorian'ny fikarohana 2017, dia nahatsikaritra an'i Hou sy ny mpiara-miasa taminy fa ny fihenan'ny NAD + dia nahatonga ny famokarana oligomera β-amyloid. Herintaona taty aoriana, nanamafy i Yao sy ny ekipany fa mampihena ny fihenan'ny Aβ sy ny fatiantoka simapika amin'ny modelin'i AD-Tg ny ADN.
Araka ny fanontana 2014 avy amin'i Yamamoto sy ireo mpiara-miasa aminy, ny NMN dia miaro ny fo amin'ny lozam-pifamoivoizana sy ny fanoherana. Talohan'ity fianarana ity, i Yamamoto dia anisan'ny ekipa 2012, izay nahitana fa ny mpanentana ny NAD + no miteraka sakafo amin'ny totozy.
Ao amin'ny 2016, De Picciotto et al. ary ireo biochemista namany dia nandinika ny fiantraikan'ny fanampiana NMN amin'ny vascular functionalité ny taha efa antitra. Noho ny fampahafantarana, ny monosukleotide nicotinamide dia nahomby tamin'ny famerenana ny dysfunction vascular, ny fikorontanan'ny oksidita, ary ny fihenan'ny elastin.
Ao amin'ireo fandalinana rehetra efa voapetaka, ireo mpahay siansa dia hanafoana ireo fepetra fantatra momba ny nokotinamide mononucleotide ampidinina ao anaty rano alohan'ny hanomezana azy ireo ny totozy.
Andeha hojerentsika ny tombotsoan'ny fitambaran'ny olombelona.
Ny vahaolana tonga lafatra dia amin'ny fampitomboana ny monotonamotide Nicotinamide body sy ny NAD + amin'ny fitsaboana NMN ivelany. Ireo Ny fanafody manohitra ny fahanterana dia manome fanoloran-tena vaovao ho an'ireo zokiolona efa antitra, izay hametraka jiro tanora.
Amin'ny trangan'ny Ischemia, mbola afaka mampiasa ny Mononucleotide Nicotinamide ianao amin'ny fanosehana azôsosis ary miteraka ny tsy fahampian'ny mitochondrial; Noho izany, miantoka ny fiarovana ny rafi-pitsaboana.
Inona no andrasanao rehefa mihena ny rà mandriaka? Eny, hitarika ny fahaverezan'ny volavola ny fanjakana. Tsy isalasalana fa ho hitanao fa ireo olona tranainy dia manana fahombiazana kely, ambany fiaretana, tsy mety, ary be reraka mandrakariva.
Iray amin'ireo fisehoan-javatra mivelatra nataon'i Dr. Sinclair izay mifantoka amin'ny fahombiazan'ny NMN amin'ny fanamafisana ny hery misintaka. Araka ny 2013 sy ny fandalinana 2018 vao haingana, ny totoana tranainy tamin'ny fito andro fitsaboana NMN dia lasa ara-batana sy mavitrika toy ny tanora mitovy aminy.
Ny fanadihadiana natao dia manaporofo fa ny tombotsoam-panafody nokoninina dia mahasoa fahagagana, fandrobana, ary manakana ny fahatsiarovan'ny fahatsiarovan-tena, izay mihanaka amin'ny fahanterana. Amin'ny ankapobeny, ity fanampiana amin'ny fanoherana ny fahanterana ity dia tompon'andraikitra amin'ny fikolokoloana ny neurônina.
Ny NMN dia mikendry indrindra ny etiology amin'ny toe-pahasalamana nomena. Ohatra, mitranga ny aretin'i Alzheimer noho ny fihenan'ny NAD +, ny tahan'ny oksizenina ambany amin'ny atidoha, ary ny tsy fahampian-tsakafo mitochondrial. Ny fampitomboana ny habetsahan'ny NMN ao amin'ny vatana dia ireo vokatra rehetra ireo.
Araka ny fanadihadiana iray navoaka tao amin'ny 2012, ny "Nicotinamide Mononucleotide Mononucleotide" dia hitondra fahavoazana ara-pahasalamana, izay matetika mitarika ho amin'ny fikoropahana. Ny totoana tranainy izay narotsaka tao amin'ny NMN dia nahitana fanatsarana lehibe teo amin'ny famokarana NAD +. Ireo fikarohana fikarohana ireo dia manana fiarovana lehibe indrindra amin'ny fangejan'ny toekarena, ny fahafatesan'ny havokavoka, ary ny aretin'ny neurologique.
Ny olona voan'ny diabeta di type II dia maneho foana ny fanoherana ny insuline. Io toetra io dia vokatry ny fisarahana amin'ny NAD +. Vokatr'izany, ny sela dia miteraka fikorontanan'ny toaka sy ny aretin-kozatra. Raha mbola tanora ianao, dia hamelombelona ny vatana amin'ny alàlan'ny hetsika ara-batana mahazatra. Na izany aza, rehefa mihantitra ny taonan'ny NAD +, dia mihena ny taovan'ny taolam-biby toy ny musculoskeles, ny atiny, ny atidoha, ary ny pancreas.
Ny antony hafa mahatonga ny diabeta mifandray amin'ny taonany dia sakafo matavy be. Ny sombin-tany tsy dia tsara loatra dia manakana ny biosynthesis an'ny NAD +. Ao amin'ny fehin-kevitra hanaporofoana ny fihenan'ny alikaukleotide nicotinamide amin'ny fitsaboana ny taonan'ny marary sy ny diabeta, dia nampiasa maodely roa i Yoshino sy ny mpiara-miasa taminy.
Taorian'ny nandraisana ny dosie NMN isan'andro nandritra ny 10 andro, dia nanamafy ireo manam-pahaizana fa ny totozy fihinana, izay niharan'ny sakafo matsiro, dia nandrakitra tsikelikely ny tsy faharetan'ny insuline. Etsy an-danin'izany, dia nanatsara ny fiheverana ny hyperlipidemia ny totozy diabeta.
Fikarohana maro no nahitana ny tombotsoa mononucleotide nicotinamide amin'ny fahanterana. Ohatra, i Mills sy ireo mpiara-miasa aminy dia nanamboatra modelim-borona mba hamotopotorana ny vokatry ny fihenan'ny fatran'ny NMN taona.
Raha ny mikasika ny fanatsarana ny rà mandriaka, ny NMN noho ny fitsaboana mahatsiravina dia manao toy izany koa amin'ny fampiharana. Ny pilina tokana dia mety ho toy ny fampiasana fitiliana isan'andro. Na izany aza, ny fahasamihafana dia tonga amin'ny ambaratongan'ny votoatin'ny NAD + ao amin'ny taova. Raha ny nokotinamide mononucleotide dia manatsara ny NAD + amin'ny atiny sy ny vatan'ny tebiteby, dia ampiasao fotsiny ny fitambaran-javatra ao anatin'ny hozany.
Eny, mety io no fanontaniana mitongilana eo amin'ny lohanao. Na izany na tsy izany, ny fikarohana natao rehetra momba ny Nicotinamide mononucleotide sy ny NAD + dia mikendry ny modely.
Manaiky i Sinclair fa mandray ny fanampiana izy. Hatramin'izao, ny manam-pahaizana dia tsy nanoratra naoty nicotinamide mononucleotide. Mifanohitra amin'izany kosa, milaza izy fa mahatsiaro ho tanora izy. Ny fanangonan-tsonia sy ny jet jet dia manahirana azy ankehitriny. Manamafy ihany koa izy fa ny rainy, izay ao anatin'ny seza fitopolo, dia mandray ihany koa ny fanampiana.
Ao amin'ny fianarana momba ny toetrandro izay tokony homena amin'ny 1st Ny June 2020, ireo mpikaroka dia mikasa ny hametraka ny fiovan'ny fahatsapana sy ny asan'ny beta-cell miaraka amin'ny fanampiana NMN amin'ny olombelona. Ireo manam-pahaizana dia avy amin'ny Sekoly Ambony momba ny fitsaboana any Washington sy ny Sekoly momba ny fitsaboana any Keio any Tokyo.
Amin'izao fotoana izao, tsy misy ny famoahana izay mamaritra ny asan'ny NMN amin'ny olombelona. Na izany aza, tokony hifikitra ianao satria misy zavatra mahandro ary mety ho fampanantenana ny fitsapana.
6. Ahoana ny fampiasana Mononucleotide nicotinamide (NMN) ho fanoherana ny fihanaky ny aretina?
Ny mahazatra dia mitovy amin'ny an'ny niacinamide sy vitaminina B3 vitamineurinotide mononucleotide vitamin BXNUMX s. Na izany aza, ny ankamaroan'ny olona aza mbola tsy mahatsapa azy akory. Ohatra, ny mpahay siansa mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Harvard dia miaiky fa mandray ny NMN, saingy tsy nahatsikaritra ny vokany izy.
2019-10-28 ao amin'ny 6: 03 pm
2019-10-30 ao amin'ny 1: 24 am
Da es sich bei NMN-Pulver um eine orale Einnahme ampaheno, können Sie einige leere Kapseln kaufen, um das Pulver einzubringen.
2019-11-17 ao amin'ny 7: 59 am
Здравейте, не намерих никъде цена (дори приблизителна) ao amin'ny NMN.
2019-11-29 ao amin'ny 6: 57 am
Здравейте Иван, нашият NMN продава 3200 долара за 1 кг, чистота 98%, фармацевтичен клас, може ли да попитам, купувате ли г
2019-11-22 ao amin'ny 4: 54 pm
Ich mahomby amin'ny NMN-Pulver für eine sublinguale Anwendung. Wie groß sind die Gebinde und zu welchem ​​Preis bieten Sie es an?
2019-11-29 ao amin'ny 6: 21 am
NMN Pulver ist ein orales Produkt zum Einnehmen. Darf ich Sie voatondro, es für den persönlichen Gebrauch oder zum Weiterverkauf zu kaufen?
2019-11-25 ao amin'ny 7: 20 pm
Ich interessiere mich fuer dia maty vokatra
2019-11-29 ao amin'ny 6: 16 am
Schön, d Sie Interesse ho tsy azo antoka NMN-Pulver haben. Ary raha tsy izany, maty ny Produkt Anti-Aging-Funktion haben.